Ny fialam-boly tsara indrindra Parks In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny fialam-boly tsara indrindra Parks In Eoropa
(Last Nohavaozina: 01/01/2021)
Raha toa ka tsy azo antoka izay voly zaridaina tany Eoropa no tsara indrindra, dia mijery intsony. Ity lahatsoratra ity dia ny lisitry ny sasany amin'ireo tsara indrindra voly zaridaina dia afaka mitsidika any Eoropa amin'izao fotoana izao! Dia homenay anao antsipiriany sy ny famaritana tsirairay ny fomba hahatongavana any izy ireo lamasinina. Aoka àry isika hanomboka amin'ny lisitra!
Vala fialam-boly lehibe indrindra any Eoropa - Disneyland Paris
Raha toa ka tsy nitsidika, ianao isalasalana fa nandre momba Disneyland in Paris. Ny valan-javaboary dia ahitana ny zava-drehetra izay misy afaka mahita ao amin'ny Disneyland am-boalohany ao amin'ny United States. Plus, izany dia ahitana lohahevitra roa zaridaina sy tanteraka ny fito Hotels on-toerana! Ianao dia mety tena mila andro maromaro raha te-hitsidika ny zava-drehetra. koa, ianao koa dia afaka mitsidika ny Walt Disney Studios marina izany manaraka ny valan-javaboary.
Raha mikasika ny mahatratra ny valan-javaboary, fa somary mora ny tonga any lamasinina. Ny iray amin'ireo foibe indrindra lamasinina hubs ao Frantsa marina akaikin'ny Disneyland. Ny foibe in fanontaniana dia Marne-la-Vallée / Chessy fiantsonan'ny fiaran-dalamby, ary afaka hahatratra azy mora foana avy na aiza na aiza Frantsa na any an-dafin'ny. Inona koa, Disneyland no misy tsy dia lavitra Paris.
Paris ho any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Bruxelles ny Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Lyon any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Lille ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Ny Vala fialam-boly malaza indrindra tany Alemaina - Europapark
Europapark no lehibe indrindra sy malaza indrindra zaridaina nanerana an'i Eoropa, taorian'ny Disneyland. Na izany aza, izany no tsy nahoana isika no nifidy azy io. Izany no iray amin'ireo tsara indrindra tany Eoropa voly zaridaina eo amin'ny hevitra noho ny-roller-coasters. Handeha mitaingina maro amin'izy ireo ianao ary tena maro tsy manam-paharoa. Ianao maintsy hanamarina Arthur – ny vaovao--roller coaster izany ny fitambaran'ny iray Indoor / ivelany ny iray amin'ny maizina mitaingina ihany koa!
Afaka mahita an'io ianao valan-dresaka mahafinaritra ao Rust, tanàna akaiky Freiburg sy Strasbourg. Izany dia midika fa afaka mahatratra Europapark somary mora foana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, avy amin'ny tanàna. The fiantsonan'ny fiaran-dalamby dia misy 4km lavitra mba hahafahanao mandeha avy eo amin'ny fidirana, na haka iray amin'ireo tapaka fiara fitateram-bahoaka izay mankany amin'ny valan-javaboary.
Strasbourg ho Ringsheim Lamasinina
Stuttgart ho Ringsheim Lamasinina
Basel ho Ringsheim Lamasinina
Offenburg ho Ringsheim Lamasinina
Ny Fairytale Renivohitra an'i Eoropa - Efteling Vala fialam-boly
Maro ny olona rehetra manerana an'i Eoropa Tsy fantatro ny momba izany ho an'ny rehetra dreamland Fairytale tia! Na izany aza, ny valan-javaboary iray no lehibe indrindra ao amin'ny firenena ny telo ny Benelux. Inona koa, efteling ny toerana rehetra ny malaza angano ho velona! Maro ny mahazatra fairytales ny Hans Christian Andersen, Charles Perrault, ary ny Rahalahy Grimm ho velona eto. Izy ireo asongadina amin'ny alalan'ny malalaka karazany ny mitaingina, niainany, sy ny maro hafa. Rehefa nozohina, ianao no mila roa andro, fara fahakeliny, mba hitsidika ny zava-drehetra!
Azonao atao ny mitsidika Efteling somary mora foana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Izany dia midika hoe mahitsy eo anelanelan'ny toerana tanàn-dehibe rehetra any Holandy. Izany no mahatonga ny valan-javaboary azo idirana avy amin'izao Pays-Bas ary ankoatra. Ny fiaran-dalamby tsara fifandraisana, dia afaka hahatratra ny kianja avy na aiza na aiza any Eoropa. Izany no antony iray hafa mahatonga Efteling isan'ny tsara indrindra tao Eoropa voly zaridaina!
Bruxelles ho Tilburg Lamasinina
Antwerp ny Tilburg Lamasinina
Berlin ny Tilburg Lamasinina
Paris ho Tilburg Lamasinina
Rehefa nozohina, ireo telo ireo ny Top Picks. Maro ny olon-kafa any Eoropa, izany ny sasany, Fa isika no mihevitra fa ireo telo ireo ihany tokoa no tsara indrindra. Ianao dia afaka Mifandraisa aminay raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny zaridaina sy ny fiaran-dalamby mitaingina azy. koa, dia aza misalasala hojerentsika ny bilaogy. Matetika isika nanoratra momba ny toerana maro sy ny fiaran-dalamby mitaingina mendrika sy nandray mitsidika rehetra manerana an'i Eoropa!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#AmusementParks #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip fiaran-dalamby Travel torohevitra Travel